हामी कहिलेसम्म अविवाहित बस्ने - अन्तरवार्ता - साप्ताहिक
काठमाडौंकी एन्जल लामा बोल्ड र ब्युटिफुल छिन् । १९ वर्षमा पाइला टेकेकी लामा केटाका रूपमा जन्मिइन्, तर उनमा महिलाको स्वभाव र व्यवहार विकसित हुँदै गयो । साढे दुई वर्षअघि तेस्रोलिंगी महिलाका रूपमा खुलेर आउनुअघि समाजका अनेक लान्छना सहँदै, संघर्ष गर्दै अघि बढेकी लामासँग बलियो आत्मविश्वास छ । उनी सफल वकिल बन्न चाहन्छिन् । राजनीतिमा रुचि राख्ने एन्जल उमेरभन्दा परिपक्व देखिन्छिन् । ब्लु डायमण्ड सोसाइटीसँग आबद्ध एन्जलले साप्ताहिकसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
मैले मेरो हुनेवाला जीवनसाथीलाई सम्झिएँ, जो त्यही कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । मैले यसो फर्केर हेर्दा उहाँलाई छेउमै पाएँ । उहाँकै अनुहारमा मेरो आँखा गयो । मैले जितें है भन्ने भावले हेर्दाको त्यो खुसी व्यक्त गर्न सक्दिनँ । एकदमै खुसीका साथ हेरिरहें । मेरी आमा पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो । मामुलाई मैले बोलाएकी थिएँ । उहाँ केही बोल्नै सक्नु भएन । शब्दविहीन हुनुभयो । भाबुक बन्नुभयो र ट्वाल्ल पर्नुभयो ।
उहाँको नाम सौरभ श्रेष्ठ हो । मेरो बाहिरी रूप नहेरी भित्री मनदेखि नै मलाई माया गर्नुहुन्छ, मलाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ । म साढे २ वर्षदेखि उहाँसँगको सम्बन्धमा छु । समाज र परिवारका अनेक बाधा, व्यवधानबीच उहाँले मलाई साथ र सहयोग दिनुभयो । दु:खका हरेक पलमा उहाँ मेरै साथमा हुनुहुन्छ । यो कार्यक्रमको तयारी सुरु भएदेखि नै उहाँले मलाई हौसला दिइरहनुभएको थियो । नजिते पनि यो कार्यक्रमको अन्तिम प्रतियोगीमा छानिनु नै ठूलो कुरा हो भनेर ढाडस दिइरहनुहुन्थ्यो ।
एउटा फेसन शोमा हाम्रो भेट भएको थियो । उहाँको साथी मोडल हुनुहुन्थ्यो । मेरो साथी पनि मोडल थियो । हामी नजिकै थियौं । एकै नजरमा माया बस्यो । हाम्रा निर्दोष आँखाहरू जुझे । हेराहेर भैरह्यो । मलाई उहाँको बोली, हिँडाइ, मुस्कान सबै मन पर्‍यो । मन पर्ने मान्छेको सबै कुरा मन पर्दो रहेछ । दुई हप्तापछि फेरि साथीहरूसँगको भेटघाटका क्रममा हाम्रो दोस्रो भेट भयो । त्यसबीच अलिअलि बोलचाल अनि फोन नम्बर साटासाट भयो ।
जुनबेला उहाँलाई देखें । वाउ ! मेरो हुनेवाला श्रीमान् यस्तै भैदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो । टक्क हेरें, गुणैगुणले भरिएको, कुनै अवगुण देखिनँ । भविष्यमा मेरा लागि यही व्यक्ति सही हुन्छ जस्तो लाग्यो । मलाई हरेक कुरामा उहाँ पर्फेक्ट लाग्नुहुन्छ । म तेस्रोलिंगी महिला भए पनि उहाँ भित्रैदेखि मलाई माया गर्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, हरेक कुरामा साथ दिनुहुन्छ ।
हाम्रो सम्बन्धलाई घरमा शतप्रतिशत स्वीकार गरिएको छ । मेरी र उहाँकी आमाले हाम्रो सम्बन्धलाई स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । उहाँहरू दुवै जना मिस पिंकको कार्यक्रममा उपस्थित पनि हुनुहुन्थ्यो । मेरो जितमा उहाँकी आमा एकदमै खुसी भएको पाएँ— आँखाबाट पनि खुसी, मनबाट पनि खुसी । उहाँले आफ्नै सन्तानको जितजस्तै मान्नुभयो । मसँग तस्बिर खिचाउन पनि आउनुभयो । मेरो प्रगतिमा कोही यसरी खुसी हुनु मेरा लागी थप खुसीको कुरा हो ।
अदालतले सँगै बस्न अनुमति दिए पनि समलिंगी, तेस्रोलिंगीसँगको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन । धारा १२, १४ र ४२ मा अधिकारको कुरा त उल्लेख छ, तर त्यो लागू भएको पाइँदैन । कानुन र यो समाजसँग मेरो गुनासो छ । हाम्रो अगाडि प्रशंसा गरे पनि पछाडि अपहेलना गरिन्छ । मानसिक यातना दिइन्छ । यस्तो कुराले मन दुख्छ । हामी पनि विवाह गरेर सकारात्मक सन्देश दिन चाहन्छौं ।
म सन्तान जन्माउन त सक्दिन । हामीले धर्मपुत्र वा पुत्री ग्रहण गर्नुपर्छ । छोरा–छोरी जे भए पनि समाजका लागि राम्रो व्यक्ति होस् भन्ने चाहन्छु । लिंगलाई होइन स्वभाव र कर्मलाई बढी प्राथमिकता दिन चाहन्छु ।
एकै पटक खुलेर आउन गार्‍हो थियो । आफ्नो कुरा कसलाई सुनाउने ? बुझिदिने कोही थिएनन् । साढे २ वर्षअघि म ब्लू डायमन्ड सोसाइटीको सम्पर्क पुगें । त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिहरूले परामर्श दिनुभयो । त्यसपछि क्रमश: सहज हँुदै गयो अनि म बिस्तारै खुल्दै गएँ ।
जब हिँड्न थालें, स्कुल जान थालें, मनैदेखि म अरूभन्दा भिन्न छु भन्ने लाग्थ्यो । साढे २ वर्षअघि जब म ब्लु डायमण्डको सम्पर्कमा पुगें, तब थाहा भयो म जस्ता व्यक्तिलाई तेस्रोलिंगी भनिदो रहेछ । म दुई–तीन वर्षको छँदा कुर्ताको सलको सारी बनाएर लगाउँथे रे । लिपिस्टिक लगाएर हिँड्थें । भाँडाकुटी र पुतली खेल्न मन लाग्थ्यो । म केटी नै हँु जस्तो महसुस हुन्थ्यो । कक्षामा पनि केटाहरूभन्दा केटीहरूसँग कुरा मिल्थ्यो ।
मेरो नागरिकता र पासपोर्टमा सबिन लामा लेखिएको छ । त्यसमा पहिलेको तस्बिर राखिएको छ । थाइल्यान्डको एयरपोर्टमा त मैले कुनै समस्या भोग्नु परेन, तर हाम्रै देशको इमिग्रेसनमा बढी नै केरकार भयो । तपाईंको पासपोर्टको तस्बिर र अहिलेको अनुहार मिल्दै मिलेन । यो त अर्कैको पासपोर्ट हो भनेर दु:ख दिइयो । नागरिकता र पासपोर्टमा लिङ्ग लेखिएको ठाउमा मेल, फिमेल र अदर्स लेखेर मात्र पुग्दैन । त्यहाँ वास्तविक नाम पनि लेख्ने व्यबस्था भए सजिलो हुने थियो ।
समलिंगी, तेस्रोलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्‍यो । हामी कहिलेसम्म अविवाहित बस्ने ? त्यस्तै बनेका कानुनहरू पनि लागू हुुनुपर्छ ।